🥇 ▷ Troy waxay sii wadataa taatikada ay kujirto ✅
Troy waxay sii wadataa taatikada ay kujirto
Wareegtada magacyada ugu caansan adduunka ee magacyada ugu magaca weyn adduunka ayaa ugu dambeyntii keentaa nolosha dagaalka ugu caansan taariikhda aadanaha.
Ma jiro khilaaf dagaal oo taariikhi ah aadanaha oo dhan oo si fiican loogu yaqaan dagaalkii Trojan. Isaga oo aan fahansanayn halyeeyadii Homer, dagaalka udhaxeeya boqortooyooyinkii Giriig iyo Troy wuxuu ku qornaa dhaqanka aadanaha tan iyo xilligii xuska.
Trailer-ka cusub wuxuu ina keenayaa dhamaadka barnaamijka ‘Homer Iliad’, markii Aquiles uu tartan geliyo horyaalkiisa ugu sarreeya, Hector, Horse Tamer, oo ku yaal irdaha magaalada Troy ku taal.
Iyada oo ay ka go’doomiyeen Homer’s Iliad, TROY waxay sheekooyinkan ku marsiinaysaa muraayad taariikhi ah si aad uga fiirsato waxa dhab ahaan dhici kara laakiin ugu dambeynti waxay kuu oggolaaneysaa inaad go’aan ka gaarto halyeeyada dagaalka ku dhici doona iyo kuwa aan dhiman karin halyeeyada.
Fiiri Su’aalaha La Isweydiiyo: https://t.co/TH35cW3nJP
– Wadarta Dagaal (@totalwar) Sebtember 19, 2019
Waxaa soo saaray Sega iyo Golaha Hal-abuurka, Wadarta Dagaalkii Saga: Troy wuxuu hiigsanayaa yoolka ah inuu siiyo iftiin aad u macquul ah dhacdooyinka taariikhiga ah ee taariikhda ugu caansan Giriiggii hore.
Taas macnaheedu waa in walxaha caadiga ah ee Wadarta Guud ay ku jiri doonaan cinwaanadan, iyadoo la maareyn doono agabyada, tirooyinka, qalabka, xeeladaha milatariga iyo xeelado gaagaaban, dhexdhexaad ah iyo kuwa muddada dheer ah oo aan mataleyno.
Isugeyn Dagaal, PC caadi ah
Ciyaaraha badan waxay wakiil ka yihiin nidaam, gaar ahaan waqtiyadii ugu dambeeyay. PC-ga, in kasta oo aad leedahay dunidaa guud ee magacyada, waxaa lagu siin karaa abaalmarinta wadarta guud ee dagaallada.
Waxaa lagu naqshadeeyay ‘keyboard’ iyo ‘linti interface’, oo ay weheliso suurtagalnimada nidaam dheeri ah oo xeelad dagaal iyo taatiko ah, Isku-darka dagaalku waa hawli u horseeday taariikhdiisa dib u soo celinta taariikhda qaab naxdin leh oo macquul ah oo aad qiyaasi karto.
In kasta oo safarradu aysan ku jirin waqtiga dhabta ah, haddana ciidamadu waxay la kulmaan saameynta waqtiga, iyadoo jeneraalku gabow noqonayaan oo ay dhalaan, iyo sidoo kale inay beddelaan tirooyinka howlgab noqda.
Sagaalkan ayaa na geeyay Rome, illaa Midowgii Yurub, ilaa Jabbaan-kii xilligi Sengoku iyo Shiinaha ee Jacaylka Saddexda Boqortooyo, oo kaliya inaan magacno dhawr, hadda waxay na hogaamineysaa dagaalka halyeeyada ah ee qeexaya inta badan dhaqanka reer Galbeedka. .
Sega wuxuu soo bandhigi doonaa A total War Saga: Troy sanadka 2020, oo kaliya loogu talagalay PC.